छिनोफानोको दोश्रो लेग कसले के भन्दै छन् !! जान्नुहोस कसको विगत के छ ?? - Experience Best News from Nepal
छिनोफानोको दोश्रो लेग कसले के भन्दै छन् !! जान्नुहोस कसको विगत के छ ??
च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा इंग्लिस क्लब लिभरपुल र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबीच मंगलबार राति पौने १ बजे खेल हुँदै छ । पहिलो लेगमा ३–० ले अघि रहेको बार्सिलोनालाई लिभरपुलको मैदानमा अग्रता जोगाउने चुनौती हुनेछ ।
बार्सिलोनाले दियो मड्रिडलाई चुनौती !! ३ स्टार खेलाडी किन्न ४०० मिलियन यूरो खर्चिन तयार
पी.एस.जी स्टार बार्सिलोना आउने बारे लिओनेल मेस्सीलाई गरे सूचित
यस्तो छ मेस्सीको बाल्यकाल देखिको फुटबल यात्रा, कसरी एक उत्कृस्ट खेलाडी बन्न सफल रहे !!
कोपा डेल र फाइनल आज, को को परे भल्भार्डेको सम्भावित ४-२-२ भित्र
टोटनहृयाम कि लिभरपुल ? को को परे सम्भावित सुरुवाति ११ भित्र